Buyzụta Akpa Akpa Akpụkpọ anụ Akpụkpọ Aka Maka Womenmụaka - Mbupu Na-akwụghị ụgwọ & Enweghị |tụ | WoopShop®
Mpempe: Casual Tote
Ime: Mpempe oghere nke ime, Mpempe Ekwentị, Mpempe Ime mkpọchi, Ime ime
Chọ mma: Akwụkwọ Ozi, Ejiri ya
Nọmba Nlele: 512341
Aha: Okomoko Handbags inyom akpa mmebe
Atụmatụ: Atọ nwere oghere nke onwe ya dị atọ, Pọọsụ na Akpa
Dabere na 39 nyocha
Mbupu ngwa ngwa. Nnukwu ngwugwu
Na Moscow ruo ogologo oge, ihe karịrị otu ọnwa! Mana nke a bụ nsogbu nke Russian Post kama! Akpa ọma! Neat, dụkọta nke ọma! Izụta m kwadoro!
Enwetara m ya mgbe otu izu gachara, ezigbo mma na mbupu ngwa ngwa, enwere m obi anụrị
Akpa ahụ bụ naanị klaasị, ọ bụ ezie na echere m ntakịrị ihe, mana ọ dị ịtụnanya. Isi ya sitere n'aka ya, mana m chere na ọ ga-agafe. Ogo adịghị mma, enwere m obi ụtọ. Ka anyị lee ihe na-eme mgbe iyi ya s